कथा – प्रवासीको व्यथा | साहित्य संगालो २०१३
कथा – प्रवासीको व्यथा
एउटा पहाडी गाउँ जहाँ एक छाक खान र एक आङ् लगाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान भालेको डाकोसँगै मानिसहरू उठ्छन् र सुर्यको किरणसँगै घरबाट बाहिर निस्किएको मानिसहरू सुर्य नबिलाएसम्म कामको ध्याउन्नमानै व्यस्त हुन्छ। उनीहरूलाई बर्षैभरी कुनै पनि दिन विदा हुँदैन घरका कोही सदस्य बिरामी भए भने पनि त्यसको हेरविचार गर्ने, उसलाई पानी तताएर दिने सम्मको न चेतना छ, न त समयनै छ यसरी सबै गाउँलेहरू आ–आफ्नो काममा अतिनै व्यस्त देखिन्छन्। यसरी व्यस्त रहेर काम गरे पनि उनीहरूको जिन्दगीमा एक छाक मासु खान महिनौ कुर्नु पर्छ वा चाडवाडनै आउनु पर्छ, खिर खान साउन १५ आउनु पर्छ भने नयाँ लुगा लगाउन पनि चाडवाड नै पर्खनु पर्छ। साना–साना केटा केटीहरूलाई स्कुल पठाउन सकेको छैन किताब, कपि किन्न र स्कुल फिस तिर्न कठिन छ। यसरी दिन रात नभनेर काम गरे पनि उनीहरूले हजारको नोट देख्न मुस्कील परेको हुन्छ। यस्ता अभाव अपुग अभागी जिन्दगीबाट अतिनै निरास हुन्छ त्यही गाउँको शिराने काईला त्यसैले उ गाउँ छाडेर शहरतिर पस्छ।
विरानो शहर उसको लागि झन् कठिन हुन्छ, यो विरानो शहरमा चिनजान कोही हुँदैन के खाने? कहाँ बस्ने? कसरी रात बिताउने? दुईचार दिन त उ अन्योलमा पर्छ भोकभोकै हुन्छ यस्तैमा उसले एउटा भारी बोकिरहेको भरीयालाई बोलाउँछ र भन्छ मत ३ दिनदेखि खाने बस्ने केही ठेगान नभएर हिंडेको छु, भोकले मर्नै लागे लौन दाई मलाई पनि यस्तै काम मिलाई देऊ। आखिर भरियाको दुःख भरियाले त बुझ्ने नै भयो। उसले लगेर होटलमा एक पिलेट म.म. खुवाउँछ र एउटा नाम्लो किनिदिन्छ, अनिसँगै लगेर जान्छ कालिमाटीको आलुगोदामतिर। त्यहाँ उ जस्ता भरियाहरू धेरै हुन्छन्। एक बोर आलु किन्ने साहुजी आयो भने तेरो र मेरो हानाथाप पर्छ। पुराना भरियाहरूले उसलाई रिस पनि गर्छ तर के गर्ने शिराने काईलाको अरू उपाय पनि केही छैन नयाँ नयाँमा उसलाई साहुहरूले पनि विश्वास गर्दैन् फाट्टा फुट्ट मात्र काम पाउँछ। त्यही कामको आधारमा उसले साथीसँग मिलेर बस्छ। यसो त्यसो गरेर उसको आफ्नो ज्यान पल्ने मेसो मिलाउन सकेको छ। यसरी केही समय बित्छ, घरबाट बाउआमाको खबर आउँछ साहुको रिन तिर्न सकेको छैन। घरको छानो चुहिने भएको छ के गर्ने हो छोरा यसरी खबर आएपछि झन शिराने काईला दुखित हुन्छ। आखिर भारी बोकेर कमाएको पैसा कति नै हुन्थ्यो र शहरको महंगीसँग जुट्नै परिगो तैपनि बचाएको केही पैसा घर पठाउँछ।
एक दिन राति उ गुन्द्रिमा पल्टिएको हुन्छ। त्यो दिन भारी पनि काम पाएकोले गर्दा उसलाई थकाई लागेको हुदैन । त्यसैले होला निन्द्रा पनि लाग्दैन। यसरी ओछ्यानमा पल्टिएर सुतेको बेला जिन्दगीको परिभाषा लगाउने कोशिस गर्छ तर उसले आफ्नो जिन्दगी सधै भरियामा नै पाउँछ। यस्तै सोच्दा सोच्दै उ निदाउँछ। भोलिपल्ट उ तिन बजे रातीनै उठ्छ, मुख पनि नधोईकन उ भारीको आसामा बजारतिर लाग्छ। सदै जसो बजारमा बिहानीको चहलपहल सुरू हुन्छ नभन्दै एकबोरा आलुको भारी भेटाउँछ साहुजी अगि लाग्छ उ पछिपछि भारी बोकेर झन्डै आधा किलोमिटर हिंडेपछि साहुजीले सोध्छ यो आलुको भारी बोकेर महिनामा कति कमाउँछौ भाई? आलुको भारीले थिचेको टाउकाको नाम्लो सार्दै शिराने काईला बोल्छ कति कमाउनेर साहुजी यो काठमान्डूको शहरमा पेट पाल्न पुर्‍याएको छु। तिम्रो उमेर कति भयो साहुजीले फेरी सोध्यो? २२ बर्ष भए साहुजी शिरानेले उत्तर दियो। लौ तिमी त युवा रहेछौ। विदेशतिर जाऊ धेरै पैसा कमाउँछौ, एउटा भरीयाको लागि यस्तो कुरा सुनेपछि त उसको मन सलबलाउन थाल्यो र मनमनै सोच्यो विदेशमा गएर पैसा धेरै कमाएर पारिघरे साहुको रिन तिर्न पाए घरको छानो फेर्न पाए कति हलुको हुन्थ्यो होला, कति रमाईलो जिन्दगी बन्छ होला।
यसरी केही बेरको सोचपछि उसले साहुजीलाई भन्यो हामी जस्तो भरीया मान्छे कसरी बिदेशमा जान सक्छौं र साहुजी बिदेश जानलाई त धेरै पैसा लाग्छ भन्छ, मेरो त लेख पढ पनि छैन के काम पाउँछ र हामी जस्ताले? साहुजीले भन्यो काम त लेबरको हो साच्चै जाने हो भने म भिसा मिलाई दिउलानी महीनाको अठार बिस हजार जति कमाई हुन्छ, खान बस्न सबै फ्री हो एसिवला कोठा हुन्छ, दिनको आठ घण्टा डिउटी गरे पुग्छ। यहाँको खर्च चाहिं ८० हजार जति लाग्छ। ओहो यत्रो पैसा काहाँबाट ल्याउनेर साहुजी? उसले प्रश्न तेर्स्यायो? त्यो त तिम्रो विचार साहुजीले भन्यो। यस्तैमा साहुजीको घर पनि आइपुगेछ त्यो साहुको त म्यनपावर कम्पनि रहेछ। त्यहाँ थुपै युवाहरू बिदेश जानलाई अन्तरबार्ताको लागि लाईन बसेको रहेछ उसले पनि केहीबेर त्यहाँको रमिता हेर्यो र अब म पनि एक पटक बिदेश जानै पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो।
त्यस दिन बेलुकी कोठामा गएर पैसा गन्यो झन्डै तिनहजार जति रहेछ अनी पासपोर्ट बनाउनलाई ५ हजार लाग्ने भएकोले दुई हजार चाहिं उसले त्यही सहयोगी साथीलाई सापटी माग्यो एक हप्ता भित्रमा पासपोर्ट बनाएर ल्ययो र त्यही सहुजीलाई पासपोर्ट दिन आयो पासपोर्टको साथमा दशहजार पैसा पनि चाहिन्छ भने पछि उ फेरी आपातमा पर्यो। अब जसरी भए पनि म विदेश जानुछ। पैसा त खोज्नै पर्यो भनेर त्यही सहयोगी साथीसँग शिरानेले सबै कुरा गर्छ। त्यो साथीले पनि म संगत पैसा छैन। तिमीलाई थाह नै छ मैले चिनेको सधै लेनदेन गरेको एउटा साहु छ त्योसँग कुरा गर नत बरू म पनि सँगै गइदिउला हुन्नत शिरानेले भन्यो लौ दाई मलाई यति कामबाट फुत्काई दियौ भने म तिम्रो गुन कहिल्यै बिर्षने छुईन म जसरी पनि बिदेशमा पैसा कामाए पछि साउब्याज गरेर तिर्ने छु। भोलिपल्ट उनीहरू रिनको खोजीमा साहु कहाँ जान्छ र बिन्ती बिसाउँछ। मैले यसलाई चिन्दिन। तिमी जमानी बस्ने भए पैसा दिन्छु तर व्याज चाहिं सयको पाँच लाग्छ नि हुन्छ? साहुले बोल्यो उनीहरूले स्वीकार गर्छ र दशहजार रूपैया लिएर आउँछ पैसा र पासपोर्ट पाए पछि म्यानपावर साहुजी खुशी हुंदै अब एक महिनाभित्रमा भिसा आउँछ अरू सत्तरी हजार तयार पारेर राख्नु है। उनीहरू मन्टो हल्लाउँदै फर्किन्छन् र त्यही आलुको भारीसँग लडाई गरेर दिनहरू बित्दै जान्छ
१५ दिनपछि खबर आउँछ। लौ कतार जाने तिम्रो भिसा आयो काम धेरै राम्रो छ तिमी त धेरै भाग्यमानि रहेछौ यति चाडै भिसा आयो पैसा लिएर आउनु। अब शिराने काईलालाई ठूलै पहाड अगाडि परेको जस्तो लाग्छ ७० हजारको पहाड कसरी पार लगाउँने उसले यताउत चिनजानको साथिहरूसंग अनुरोध गर्छ केही साथीहरूको सहयोग पाउँछ करीब २० हजार जति जम्मा गर्छ अझै ५० हजारको पहाड उसको अगाडि छ अन्तमा त्यही पुरानेा १० हजार दिने साहु कहाँ पुग्छ र साथीको जमानीमा ५० हजार पैसा रिन लिन्छ यसरी जम्मा गरेको पैसा सबै लगेर म्यानपावर साहुलाई बुझाउँछ उसले अब तिम्रो एक हप्ताभित्र उडानहुने आश्वाशन पाउँछ। शिराने काईला अब बिदेश जाने भयो भनेर गाउँमा आमा बाबालाई बिदा माग्न आउँछ सबैले रामै्र हुने भयो भनेर बिछोडको खुशी साट्छ। यता म्यानपावरको काम त हो भोलिभोलि भन्दा भन्दै ३ महिना भुलाई दिन्छ र बल्ल भारत हुदै कतारको लागि पठाउछ जब कतारमा आउछ सेतो लुगा लगाएको मालिक गाडि लिएर एरपोर्टमा भेटाउँछ साहुले भन्छ सलामवलेगम इन्त जेन? बिचरा शिराने काईला के भन्ने भन्ने हुन्छ इङ्लिसमा बोल्छ एस एस अब साहुले गाडीमा राखेर सिदा भेडा गोठमा पुर्याउँ छ र भन्छ तुम्हारा काम ए है.. शिराने अलमल पर्छ काम नगरौं भने साहुको रिन गरौभने चर्को घाममा भेडा चराउनु पर्ने यो कस्तो जिन्दगी रहेछ भन्दै काममा लाग्छ आज भन्दा भोलि भन्दा बानि पर्छ महिना पनि मर्छ साहुले तलव कतारी रियाल ५००/– दिन्छ उसको खाना खर्च कटाउँदा खाली दुई सय पचास मात्र तलबको पैसा बचेको हुन्छ र उसले चारपयमा ढल्केर रातभरी सोच्छ अब मैले साहुको रिन कहिले तिरी सक्छ होला? कहिले विदेश आएको रिन तिर्ने, कहिले घरको रिन तिर्ने, कहिले खरको छानो फेर्ने यस्तै यस्तो सोच्दा सोच्दै निदाउँछ। यसरी नै उसको दिनचार्यहरू चलिरहन्छ। यस्तैमा एक दिन घरबाट चिठ्ठी आउँछ चिठ्ठीमा लेखेको हुन्छ।
तिम्रो खरको छानो चुहेर
पिढीमै आहाल छ।
तिम्रो घरको आँगन भत्केर
साह्रै नै बेहाल छ।
विदेशमै डुलेर गैसक्यो जीवन
छैनकी कसो हो घर फर्कने मन।
This entry was posted in Nepali Stories and tagged कथा, प्रवासीको व्यथा by भण्डारी2013. Bookmark the permalink.